Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 19, 2021 - Independent Oromia
Kurfii RSWO · Kibxata Onkoloolessa 19, 2021
Hawaasni Oromoo beela hamaaf saaxilamee jiraachuu
Kibba Oromiyaa, Konyaa Gujii Bahaa keessatti daafii dheerachuu hongeen, Uummanni Oromoo beela hamaaf saaxilamuu; horiinis gaaga’amaa jiraachuu.
Dheerachuun hongee, balaa beelaa amma uumameef sababa battalaa haata’u malee, gannoota afran darban irraa qabuun, duulli qabata deggersa WBOn Uummata Oromoo irratti labsamuun, hawaasni Oromoo kun hidhaa, dararaa fi ajjeechaa hamaaf saaxilamee kan turee fi jiru ta'uun;
Dabalataanis, gargaarsi barnoota, fayyaa fi soorata hawaasaaf yaadamee, dhaabbilee mit-mootummaan gamasitti ergamu, qabata deggersa WBOn, Hawaasa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa keessa jiraatu irraa muramuu fi aangawoota MKII Konyaa saniin mataa-maramuun gama biraatti maqsamuun ykn maallaqatti jijjiiramuun faayidaa namoota dhuunfaaf oolfamaa jiraachuun, balaa beelaa yeroo ammaa mudatee jiru kanaaf sababoota gurguddaa ta'uu isaaniiti.
Hammaachuu hidhaa fi yaalii Oromoo waliin dhahuuf taasifamuu
Hidhaa fi dararaan Uummata Walloo irratti raawwatamu akka-malee hammaatee kan jiru ta'uu.
Gama biraatiin ammoo, qaama Hawaasa Oromoo keessaa namoota muraasa faayidaan bituun, gariis, barsiisa dogoggorsaa fi jibba WBOn adoochanii dabsachuun, hidhachiisanii qaama isaanii (hawaasa Oromoo nagaya) irratti duulchisuuf, yaaliin qaamota MKIIn taasifamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.